Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Diabetic Medicines and Food ဆီးချို
Diabetic Medicines and Food ဆီးချို
ဆီးချိုဆေးတွေ - • Metformin ဆီးချိုထိန်းဆေး၊ 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ လူကြီး 2550 mg ထက်မကျော်စေရ၊ ကလေး 2000 mg ထက်မကျော်စေရ၊ • Sulfonylureas ဆီးချိုစားဆေး၊ - ပဌမမျိုးဆက် Orinase (tolbutamide) = 500 - 3000 mg; Tolinase (tolazamide) = 100 - 1000 mg; Diabinese (chlorpropamide) = 100 - 500 mg - ဒုတိယမျိုးဆက် Glucotrol (glipizide) 2.5 - 40 mg; Glucotrol XL (ext. rel. glipizide) 2.5 - 20 mg; Micronase, Diabeta (glyburide) 1.25 - 2.0 mg; Glynase (micronized gly.)3- 12 mg - တတိယမျိုးဆက် Amaryl (glimepiride) 1 - 8 mg d. ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = သကြားဓါတ်နဲခြင်း၊ အစာမကျေခြင်း၊ ပျို့၊ ရင်ပူ၊ သွေးအားနဲ၊ ဝလာ၊ • Alpha-Glucosidase inhibitors (Acarbose, Miglitol, Voglibose) ဆီးချိုစားဆေး၊ • Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (DPP-4) ဆီးချိုစားဆေး၊ • Glibenclamide, Glimepiride = ဆီးချိုအတွက်ဆေး။ • Insulin, Sulfonylurea injection ဆီးချိုအတွက်ထိုးဆေး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ဆေးထိုးသည့် နေရာ နီ-ရောင်-ယား၊ ကိုယ်ရောင်၊ အလာဂျီရ၊ ဒီဆေးတွေနဲ့ မသင့်ပါ။ • Furosemide or Frusemide (Lasix) ဆီးသွားစေသည့်ဆေး ဆီးချိုးရှိသူတို့အား မပေးရ၊ • Estrogen and Progestogen ဟော်မုန်း နှစ်မျိုး ပါဝင်သည့် ကိုယ်ဝန်တားစားဆေး၊ ဆီးချိုရောဂါ ရှိနေလျင် မသုံးသင့်။ • Depo-Provera ကိုယ်ဝန်တား ၃ လခံထိုးဆေး၊ ဆီးချိုရောဂါ ရှိလျင် မသုံးသင့်။ • Dexamethasone (စတီရွိုက်)၊ ထိုးဆေး၊ စားဆေးကနေ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး ဆီးချိုဖြစ်နိုင်သည်။ သွေးထဲရှိသကြား (ဂလူးကို့စ်) ဓါတ်စစ်ဆေးခြင်း အဖြေ (၁) ပုံမှန် ဘာမှမစားပဲစစ်ခြင်း Fasting Value = ၇ဝ မှ ၁ဝဝ။ အစာစားပြီးစစ်ခြင်း (စားပြီး ၂ နာရီနောက်) Post Prandial = ၁၄ဝ ထက်နည်းရမည်။ (၂) ဆီးချိုအစအပိုင်း ဘာမှမစားပဲစစ်ခြင်း Fasting Value = ၁ဝ၁ mg / dl မှ ၁၂၆ mg / dl အစာစားပြီးစစ်ခြင်း Post Prandial = ၁၄ဝ mg / dl မှ ၂ဝဝ mg / dl (၃) ဆီးချိုဖြစ်နေပြီ ဘာမှမစားပဲစစ်ခြင်း Fasting Value = ၁၂၆ mg / dl အထက်။ အစာစားပြီးစစ်ခြင်း Post Prandial = ၂ဝဝ mg / dl အထက်။ (၁) ပုံမှန် ဘာမှမစားပဲစစ်ခြင်း Fasting Value = 4.0 မှ 5.9 mmol/L အထိ။ အစာစားပြီးစစ်ခြင်း (စားပြီး ၂ နာရီနောက်) Post Prandial = 7.8 mmol/L ထက်နည်းရမည်။ (၂) ဆီးချိုအမျိုးအစား (၂) ဘာမှမစားပဲစစ်ခြင်း Fasting Value =4မှ7mmol/L အထိ။ အစာစားပြီးစစ်ခြင်း Post Prandial = 8.5 mmol/L ထက်နည်းရမည်။ (၃) ဆီးချို အမျိုးအစား (၁) ဘာမှမစားပဲစစ်ခြင်း Fasting Value =4to7mmol/L အစာစားပြီးစစ်ခြင်း Post Prandial =9mmol/L ထက်နည်းရမည်။ (၄) ကလေး ဆီးချို အမျိုးအစား (၁) ဘာမှမစားပဲစစ်ခြင်း Fasting Value =4to 8 mmol/L အစာစားပြီးစစ်ခြင်း Post Prandial = 10 mmol/L ထက်နည်းရမည်။ - Diabetic neuropathy ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အာရုံကြောရောဂါ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/06/diabetic-neuropathy.html “ဆီးချိုရှိလျှက် အသက် ၁၂ဝ ရှည်ပါစေ။” ဒေါက်တာတင့်ဆွေ